Varotra orinasa - Mpanamboatra vokatra any Sina, mpanome
Sokafy ny fonon-tanana any aoriana
Fonon-tanana mety ho an'ny olona tia hetsika ara-panatanjahantena ivelany toa ny bisikileta, ny bisikileta, ny bisikileta amoron-dàlana, ny môtô, ny gym, ny fiakarana an-tendrombohitra, ny fitsangatsanganana ny lakana, ny volom-borona, ny jono, ny fitsangantsanganana ary ny fanjonoana. Miaro ny felana ny palma sponjy amin'ny endrika ergonomika. Mora mora, matanjaka, ary mampitombo fampiononana rehefa miasa. Arovy ny fehin-tanana sy ny tanana, aoreno ny ratra sy ny rora.
Tarika fanoherana hip
Ny tarika ataonay dia vita amin'ny fitaovana elastika sarobidy ary nitazona ny fenitra avo lenta azo atao, tsy mifono ireny tarika ireny ary tsy hanapahana na hanakodia eo amin'ny tongotrao raha toa ka hiasa ianao; dia ahitana boky fanatanjahan-tena izay misy ny tongotra mahasoa sy ny fanatanjahana ny fananana fananana, ary koa kitapo miendrika kitapo miendrika kitapo ho an'ny fantsom-baravarana amin'ny dia lavitra sy lavitra.
Ny sosona randrana roa vita amin'ny plastika izay malefaka sy tena tsara ho an'ny fampiononana farany, ny loko mamirapiratra tsara ho an'ny safidinao, mahazo aina hitafy ary haharitra, ny hatsembohana elastika dia manana elastika tsara izay mahatonga azy ireo hifanentana amin'ny ankamaroan'ny lahy sy ny vavy. tsy solofaly, voajanahary tsy manitra fofona zezika hitazahazy anao mahafinaritra.
Ny felam-palaka matevina vita amin'ny volom-borona mavokely dia manohitra ny tsofoka, mampiadana, manafintohina. Lamba lamba matevina any an-damosina ho an'ny hetsika miadana sy fofonaina ary mientanentana. Ny famolavolana rantsan-tànana, ny ankihiben-doko ary ny sorok'afo dia mety hiondrika fatratra. Amin'ny fonon-tànana fofon'aina afaka miaro anao amin'ny ratra amin'ny tànana. Havitana elatra matevina, matevina Velcro mafy. Lela masiaka ho mora ampiasaina.
Fonon-tady fanatanjahantena totohondry
Ireo ampahany amin'ny felana dia mora-miaro amin'ny fonon-tanana mahazatra, ny ampinga amin'ny rantsantanana dia natao amin'ny rantsan-tànana mameno mba hanomezana fiarovana anao bebe kokoa. Ny lamosin'ny tanana dia vita amin'ny hoditra sy kalitao avo lenta, ny fitazonana ny tananao ho maina sy ahetsiketsika mba hialana amin'ny fivoninan-tànana. Malemilemy sy mahazo aina ny vavaky ny mpampita feo mampihena.
Mampirisika ny fitomboan'ny hafanana sy ny hatsembohana rehefa ampiasaina mandritra ny fanazaran-tena; Mifangaro sy azo zahana hanitsy amin'ny endrikao sy ny habe. Ajanony fotsiny ireo manodidina ny feny. Ao anatin'izany ny mpamatsy am-bolo neoprene roa ho an'ny fiononana farany; Fitaovana maharitra ho fanampiana matanjaka; Wraparound Style mora apetraka ary esorina; Ny fanohanan'ny neoprene dia manampy amin'ny fitazonana ny hozatry ny feny
Nyakan-kena fehikibo nylon
Ny lamba nilona fanosotra dia mitazona maina ny hoditra, malefaka mahomby mampandeha mandritra ny 24 ora, na dia matory aza. Miakanjo am-pahamendrehana sy am-pahamendrehana amin'ny akanjo ho an'ny fampisehoana na fanarenana, teknolojia anti-fofona, mifehy ny mari-pana amin'ny vatana, miady amin'ny bakteria ary manohitra fofona. Mametra ny fihanahana ny fampihenana diplaoma ary mampitombo ny fikorianan-dra, manampy amin'ny fanamaivanana ny sela mamirapiratra